Wararka Maanta: Isniin, Dec 17, 2012-Ciidamada Ammaanka Kenya oo Baaritaanno ay dad badan ku qabqabteen ka wada Xaafadda Islii ee Magaalada Nairobi
Xaafadda Islii oo ay Soomaalidu degto ayaa jawigeedu si weyn uga bedelan yahay sidii uu ahaa jiray, iyadoo ay xiran yihiin goobaha ganacsiga, sidoo kalena aan jirin isku socodkii gaadiidka ee horay uga jiri jiray.
"Maanta baaritaanno ayaa ka socda xaafadda Islii, waxaa xiran goobihii ganacsiga intooda badan, sidoo kale waxaa aad u yar isku socodka gaadiidka iyo dadka," ayay HOL u sheegay Ubax Maxamed oo ka mid ah dadka ku nool xaafadda Islii.
Baaritaannada ay ciidamadu sameynayaan ayay ku raadinayaan dadka aan haysan sharciga, kuwaasoo aan la ogeyn go'aanka ay dowladdu ka qaadanayso iyadoo la xusuusto in dhawaan waaxda arrimaha qoxootiga Kenya ay ugu baaqday dadka aan sharciyada haysan iyo qoxootiga inay dib ugu laabtaan xeryaha Dhadahaab iyo Kaakumo.
Dhanka kale, waxaa soo kordhaya khasaarihii ka dhashay qaraxyadii xalay dhacay xaafadda Islii, iyadoo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in saddex qof ay ku dhinteen in ka badan toban qof oo kalena ay dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen.
Weerarradan oo ahaa kuwo is-xigay ayaa waxay ka dhaceen baar ay dad badan ku sugnaayeen, waxaana weerarradan ay imaanayaa iyadoo toddobaadyo ka hor ay ka dhaceen xaafaddaas qaraxyo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Saraakiisha booliiska dalka Kenya ayaa sheegay in weerarradii xalay ay u qabteen dhowr qof oo Soomaali ah iyo nin Yemeni ah kuwaasoo ay aad uga shakisan yihiin ayna socdaan baaritaanno lagu xaqiijinayo dambiga lagu tuhmayo.